तपाइँ कार चलाउनुहुन्छ ? कोरोनाबाट बच्न यी उपाय अपनाउनुहोस् Bizshala -
तपाइँ कार चलाउनुहुन्छ ? कोरोनाबाट बच्न यी उपाय अपनाउनुहोस्
काठमाण्डौ । यतिबेला कोरोनाभाइरसले मानिसको दैनिक जनजीवन आतंकित पारेको छ। कोरोना संक्रमण हुने डर मानिस त्रस्त छन्।
यो भाइरस विभिन्न माध्यमबाट मानिसमा सर्ने भएकाले आफूले प्रयोग गर्ने वस्तुुको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। विशेषगरी यदि तपाइँ दैनिक कारमा यात्रा गर्नुुहुुन्छ भने कारको सरसफाइमा उचित ख्याल गर्नुु पर्छ। किनकि कोरोनाभाइरस तपाइँको कारको डोर ह्यान्डल, सिट, स्टेरिङ जता पनि हुुन सक्छ।
यसरी गरौँ कारको सरसफाइ –
१. सबैभन्दा पहिले स्वयंलाई स्वच्छ राख्ने
यदि तपाइँले आफूलाई स्वच्छ राख्नुुभयो भने कारभित्र कोरोना प्रवेश गर्नुु शून्यबराबर हुुन्छ। यस्तोमा तपाइँले विश्व स्वास्थ्य संगठनले व्यक्तिगत सरसफाइलाई लिएर जारी गरेको निर्देशिकालाई निरन्तर पालना गर्नुुपर्ने हुुन्छ। यदि हातलाई बेलाबेलामा सेनिटाइनर वा साबुुन पानीले सफा गर्ने हो भने कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ।
गाडी चलाउँदा वा चलाइसकेपछि हातलाई राम्रोसँग धुुनुपर्दछ वा सेनिटाइजर दल्नुुपर्दछ। यसका लागि कारमा सधैँ सेनिटाइजर राख्नुपर्छ। यदि कोही अन्य व्यक्ति कारमा चढे उसलाई पनि सेनिटाइनर प्रयोग गर्न दिनुुपर्छ। सम्भव भएसम्म मास्क लगाएर कार चलाउनुुपर्छ। कारमा सवार अरुलाई पनि मास्क लगाउन भन्नुपर्छ।
२. कारको क्याबिनलाई सफा राख्ने
कारको क्याबिन सफा राख्नुु एकदमै जरुरी हुुन्छ। अहिले झन् कोरोनाको संक्रमण हुुन सक्ने भएकाले क्याबिनको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुुपर्छ। यसका लागि क्याबिनलाई सेनिटाइज गर्नुुपर्छ।
कारमा तबसम्म भाइरस रहिरहन्छ जबसम्म कार सफा गरिँदैन। क्याबिन सफा गर्न जुुनसुुकै पनि क्लिनिङ प्रोडक्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। कारको स्टेरिङ, ड्यासबोर्ड, एसी विङ्स आदिलाई राम्ररी सफा गर्नुुपर्दछ।
३. पटक–पटक छुुइने ठाउँलाई सफा गर्ने
कारमा पटकपटक ती ठाउँलाई सफा गर्नुु एकदमै महत्वपूर्ण हुुन्छ। खासगरी कारको डोर ह्यान्डल धेरै पटक छुुइने हुँदा यसको सरसफाइमा धेरै नै सावधानी अपनाउनुुपर्ने हुुन्छ।
यतिमात्रै नभई डोर ह्यान्डल सफा गरिसकेपछि हातलाई सेनिटाइजरले सफा गर्नुुपर्छ। यसका साथै पटकपटक छुुइने स्टेरिङ ह्विल, गियरबक्स, ह्यान्ड ब्रेक, सिट एट्जसमेन्ट लिभर, सिट बेल्ट, म्युुजिक सिस्टम, टचस्क्रिन आदिलाई निरन्तर रुपमा सफा गरिरहनुुपर्दछ। यी सबै ठाउँलाई कुुनै पनि कीटाणुुनाशक प्रयोग गरेर सफा कपडाले सफा गर्न सकिन्छ। सफा गर्न प्रयोग गरिएको कपडालाई समेत सफा राख्नुुपर्दछ।
४. सिट बेल्ट र कभरको सफाइ
भाइरसले कारको सिट बेल्ट र कभरमा समेत आफ्नो घर बनाउन सक्छ। यसमा भाइरस परे भाइरस तपाइँको लुुगा, हात, मुुखमा सजिलै पुुग्न सक्छ। त्यसैले सिट बेल्ट र कभरलाई सफा गरिरहनुुपर्दछ। यसको सफाइका लागि पानीमा स्याम्फुु मिसाएर सफा कपडाले पुुछ्नुु सकिन्छ।
राति कार पार्किङ गरेको समयमा कीटाणुुनाशक स्प्रे प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। यसले कारमा भएको सबै कीटाणुु र भाइरसलाई निष्तेज पार्छ।
५. एअर कन्डिसनको सफाइ
कुुनै पनि प्रकारको एसीमा भाइरस तीव्र गतिमा सक्रिय हुुन्छ र तीव्र गतिमा फैलिन्छ। कारको क्षेत्रफल कम हुुने भएकाले एसी सुुचारु भएपछि भाइरस कारमा भएका सबैमा पुुग्न सक्छ। त्यसैले कारको एसी भेन्टस्लाई निरन्तर सफा गरिरहनुुपर्दछ।
६. सकेसम्म एक्लै यात्रा गर्ने
कोरोनाको संक्रमण बढिरहँदा सकेसम्म एक्लै कारमा यात्रा गर्ने प्रयत्न गर्नुुपर्दछ। यदि कोही अन्य साथि वा चिनजानका व्यक्तिलाई चढाउनुुपरे सेनिटाइज प्रक्रियाको पालना गर्ने र गर्न लगाउनुपर्दछ। – एजेन्सी
Be safe from corona while travelling in car